Cook Islands - Niue Travel Bubble dia afaka manomboka amin'ity volana ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Cook Islands - Niue Travel Bubble dia afaka manomboka amin'ity volana ity
Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao Momba ny Nosy Cook • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • Vaovao Vaovao Niue • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Janoary 8, 2021
Herinandro 2 mahery taorian'ny nanambarana fa misy ny varotra fitsangatsanganana eo amin'ireo firenena nosy roa ao amin'ny Nosy Cook sy Niue, dia nilaza ny tompon'andraikitra fa hanomboka 2 volana mialoha farafahakeliny ny fiandohan'ity kitapo fitsangatsanganana ity raha oharina amin'ny efa nambara teo aloha. Ity bubble ity dia hahafahan'ny mpandeha hanaraka ny quarantine fitsangatsanganana mandritra ny 14 andro. Ny Niueans dia afaka afaka nandeha nankany Nouvelle-Zélande koa raha tsy nisy quarantine raha vantany vao tapaky ny volana janoary, ary mandroso koa ny fivezivezena eo amin'ny Nosy Cook sy Aostralia.
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny Nosy Cook dia nanondro fa ny Nosy Cooke - Niue vongan-dàlana dia mety manomboka hatramin'ny volana Janoary 2021. Nosy Niue dia firenena kely eo amin'ny 1500 kilaometatra miala ny morontsirak'i New Zealand. Ny vaovao dia tonga vao afaka tapa-bolana taorian'ny namoahan'ny praiminisitra Jacinda Ardern sy Brown famoahana fampahalalam-baovao iraisana izay nanambara tamim-pomba ofisialy ny fizotran'ny dia teo amin'ireo firenena roa tonta.
Ny fanombohan'ity fiaingam-pandehanana ity dia 2 volana talohan'izay farafahakeliny noho izay nambaran'ny governemanta tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay fa hatsangana ny tetezana amin'ny faran'ny volana martsa. Ny biraon'ny Nosy Cook Ny praiminisitra, Mark Brown, dia nilaza tamin'ny tao an-toerana fa misy ny asa fanomanana haino aman-jery eo anelanelan'ny firenena roa tonta.
Ity bubble fitsangatsanganana ity dia ahafahan'ny olona avy amin'ny firenena nosy roa handeha malalaka nefa tsy mila mitokantokana mandritra ny 14 andro tsy maintsy fantatry ny olona eran'izao tontolo izao.
Nilaza i Ardern sy i Brown tamin'izany fotoana izany fa nanome toromarika an'ireo tompon'andraikitra izy ireo mba hiara-hiasa hatrany hametraka ny fepetra rehetra ilaina alohan'ny fipetrahan'ny dia izay nolazain'izy ireo fa hitranga amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona ho avy.
Zava-misy ao Nouvelle Zélande
Nilaza i Ardern teo aloha fa hisy ny fomba fanatonana an-dalambe ny tetezana amin'ny habakabaka - miaraka amin'ny dingana voalohany amin'ny fampiharana ny fidirana tsy misy quarantine mankany Nouvelle Zélande ho an'izay tonga avy any amin'ny Nosy Cook. Ny Nosy Cook dia mijanona ho iray amin'ireo firenena vitsivitsy manerantany ary any amin'ny faritr'i Pasifika hijanona tsy misy COVID.
Afaka nizotra nankany Nouvelle-Zélande ny Niueans raha tsy tamin'ny quarantine raha vao tapaky ny volana janoary. Ny praiminisitra Niue, Dalton Tagelagi dia nilaza fa efa niresaka matetika tamin'ny governemanta New Zealand momba ny volan'ny fitsangatsanganana izy. Tagelagi, izay nosy dia ampahany amin'ny fanjakan'i Nouvelle-Zélande koa, nilaza fa ny fanombohana amin'ny dia lavitra dia izay tiany kokoa ho an'i Niue.
“Mihevitra aho fa ny roa-lalana dia amin'ny telovolana, hoy ny volana martsa ho avy, saingy manantena aho fa ny fomba tokana dia amin'ny volana janoary na feb. Fantatrao fa fanombohana ny fizahana ary ho hitanao ny fandehan'ny raharaha fa ny tanjona voalohany sy ny tanjona lehibe dia ny fitsangatsanganana maimaim-poana amin'ny quarantine. ”
Dalton Tagelagi dia nilaza fa raha mahomby ny bubble de la Cook Islands dia mety hanaraka tsy ho ela i Niue. "Ny mponin'ny nosy dia niaina tsara nandritra ny taona sarotra indrindra teto amin'ny nosy," hoy izy.
Taorian'ny firoboroboan'ny firaketana an-taonany maro, ny areti-mifindra coronavirus dia nahita ny firenena nisy indostrian'ny fizahan-tany 1600 nidina hatramin'ny zero. Nilaza i Tagelagi fa na dia nanohana ara-bola ny governemanta aza ny firenena mpamatsy vola, indrindra ny Nouvelle Zélande, dia tsy mora izany.
"Tsy maintsy miverina amin'ny laoniny isika, heveriko fa ny fomba fiaina taloha eto izay ahafahantsika mirona kokoa amin'ny tany sy ny ranomasina hivelomana. Sarotra izany, saingy mitazona tsara izahay, ”hoy izy.
Ardern dia efa nanambara bubble fitsangatsanganana miaraka amin'ny Nosy Cook sy Aostralia, izay tokony hisokatra amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2021.